विमल बेल्जियम लागे | Hamro Khelkud
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७७ फागुन २०-२७ सम्म गण्डकी प्रदेशमा
रोहित र भारीको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा आर्मीलाई कास्य
भलिबलमा एपीएफ र पुलिस च्याम्पियन
मलेसियालाई नेपालको बलियो चुनौती
पटक शेयर गरिएको
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर विमल घर्ती मगर ट्रायलका लागि बुधबार बेल्जियम प्रस्थान गरेका छन् । विमल मध्यान्ह १२:३० को टर्किस एयरलाइन्सको उडानमा बेल्जियमतर्फ लागेका हुन् ।
१० हप्ताका लागि बेल्जियम जान लागेका विमलले त्यहाँको दोस्रो डिभिजन क्लबमा ट्रयाल दिनेछन् । ट्रायलमा सफल भएमा उनी त्यहि क्लबमा अनुबन्ध हुन सक्ने बताइएको छ । क्लबले उनलाई जनवरीसम्म प्रशिक्षणमा सामेल गराएर त्यसपछि अनुबन्ध गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
गत वर्ष रुस्लान थ्री स्टारमा आबद्ध भएका विमल केहि समय भारतीय क्लब मोहन बगानमा आबद्ध भएका थिए । यद्दपी उनले त्यहाँ धेरै अवसर भने पाएनन् । त्यहाँबाट उनी पुनः थ्री स्टारबाट खेलका थिए । तर, लिगमा भने उनी नवप्रवेशी क्लब च्यासलमा आबद्ध भए र उनले जारी लिगका ५ चरणका खेल खेलेका थिए ।
विमलको उच्च प्रदर्शनबाट प्रेरित नेपाल बंगालदेशमा असोजमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा सेमिफाइनल सम्म पुगेको थियो । उनले प्रतियोगितामा २ गोल गरेका थिए । राष्ट्रिय टोलीका लागि विमलले पछिल्लो समय सुधारिएको प्रदर्शन गरेका छन् ।
विमलको कप्तानीमा नेपालले सन् २०१५ मा साफ यू-१९ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै उनले लगातार सफलता हात पारे । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक, बंगबन्धु गोल्डकप उपाधि र एएफसी सोलिडारिटी कपमा उनको प्रदर्शन महत्तपूर्ण रहेको थियो ।
जारी ए डिभिजन लिगमा च्यासलका लागि नियमित खेलेका विमलले क्लबसँग करार रद्द गरेका छन् । आपसी समझदारीमा करार रद्द गरिएको हो ।
प्रिन्स दोस्रो चरणमा जापानी खेलाडीसँग पराजित
सात सेकेन्डमै गोल !
ब्राइटनमाथि टोटेनहमको कठिन जित
बार्सिलोनाले डिर्पाेटिभोलाई हरायो, उपाधिबाट एक जित टाढा
‘यो नै असली बार्सिलोना हो’ – मेस्सी...
मुम्बईसँग खेल्दै दिल्ली, सन्दीपको संभावना न्यून !...
हैदरावाद उपाधि दाबेदार चन्नईसँग भिड्दै...
नेपालको सानदार जित तर, विश्वकपमा पुग्न असफल...
च्याम्पियन्स लिगमा सनको कीर्तिमान...